Mpanamboatra sy mpamatsy latabatra atsangana | China Lift Table Factory
Latabatra fampiakarana Warehouse Equipment dia vokatra manan-danja amin'ny asa fitehirizana entana izay misy raharaham-barotra ao Daxlifter. Fikarohana Qddao Daxlifter ary mamolavola latabatra fiakarana hety, kamio karazana palisset scissor, camion pallet karazana scissor elektrika ary fanaraha-maso automatique pallet automatique sns. serivisy ho an'ny mpanjifanay amin'ny latabatra fananganana hety sns…
China E miendrika latabatra fampiakarana scissor matetika ampiasaina amin'ny asa fitantanana paleta izay tsy maintsy ampiasaina amin'ny latabatra fananganana karazana E hampiakarana azy, avy eo ampiasao forklift hamindra ny paleta ho any anaty fitoeram-bokatra na kamiao. Misy maodely mahazatra ho an'ny latabatra fampiakarana hety E na azontsika atao koa mifototra amin'ny zavatra takinao
Daxlifter Low Profile Scissor Lift latabatra famolavolana ho an'ny famoahana & famoahana entana na pallet ao ary ny anay amin'ny kamio na ny hafa. Sehatra Ultralow dia mahatonga ny kamio pallet na ny fitaovana fitehirizana entana wotk hafa mety ho mora entina hanle entana na paleta.
Izahay dia nanampy sehatra roller ho an'ny sehatra scissor raikitra mahazatra mba hahamety azy amin'ny asan'ny tsipika fivoriambe sy indostria mifandraika amin'izany. Mazava ho azy, ho fanampin'izany, manaiky countertops sy habe namboarina izahay.
Miankina amin'ny takiana samihafa amin'ny mpanjifanay dia afaka manolotra endrika hafa izahay ho an'ny latabatra fiakarana hety izay afaka hanamora ny asa sy tsy hisavoritaka.
Ny sehatra scissor raikitra mavesatra dia mazàna ampiasaina any amin'ny toeram-piasana toeram-pitrandrahana vaventy, toerana asa fanamboarana lehibe ary tobin-tseranana lehibe. Ny haben'ny sehatra, ny fahaizany ary ny haavon'ny lampihazo dia mila ampanjifaina.
Ny latabatra fampiakarana hety avo roa heny dia mety amin'ny asa amin'ny haavo miasa izay tsy azon'ny latabatra fananganana hety tokana, ary azo apetraka ao anaty lavaka izy io, ka azo hajanona amin'ny tany ny latabatra fananganana hety ary tsy ho lasa sakana amin'ny tany noho ny haavony.
Ny vokatra dia aondrana any Eropa, Amerika, Afrika ary firenena sy faritra maro hafa. Ny tsena anatiny dia miparitaka eraky ny tanàna maro any Shina, ary ny vokatra dia eken'ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany. Notohizan'ny orinasa ny varotra sy ny R&D an'ny andiany roa misy ny latabatra fiakarana herinaratra raikitra sy ny kamiaonety pallet ary nivoatra ho mandeha ho azy.